Kompany oo rajeynaya xal fudud si uu heshiis ugu saxiixo Man City | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kompany oo rajeynaya xal fudud si uu heshiis ugu saxiixo Man City
Kompany oo rajeynaya xal fudud si uu heshiis ugu saxiixo Man City
Posted by: Ahmed Haaddi October 16, 2018
Muqdisho – Daafaca muddada dheer ka maqan kooxda Man City ayaa ku jira sannadka ugu dambeeya ee heshiiska uu kula joogo kooxda heysata horyaalka Premier League, laakiin ma ahan mid degdeg ah oo qalinka ugu duugayo heshiis cusub.
Vincent Kompany ayaa weli rajeynaya inuu sii joogo kooxda Manchester City, laakiin wuxuu sheegay inaysan cadaadis ku saarneyn kooxda.
Haddii aan la kordhin heshiiska uu kula joogo naadiga 32 jirkaan ayaa noqon doona mid xor ah dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Kompany, oo muddo toban sanno ah ku qaatay garoonka Etihad Stadium, ayaa jeclaan lahaa inuu sii dheeraado xiriirka uu la leeyahay kooxda.laakiin waxa uu sheegay inuusan dooneynin inuu City la furo wadahadallo.
Nin ayaa ku guuleystay toddobo koob oo waaweyn intii uu joogay Sky Blues,wuxuuna Daily Mail u sheegay: “Marka ugu horeysa, xaaladda City waa mid aad u fudud. “Waxaan ku jiraa kooxda,halkaas oo aan ku dareemo raaxo.
“Xiriir aad u wanaagsan ayaan la leeyahay xubin kasta oo ka mid ah kooxda, sidaasi darteed ma jirto baahi loo qabo inaan si joogta ah uga hadlo xaalad qandaraas,Waxaan ku jiraa xaalad raaxo leh, dad fiican ayaa jooga kooxda oo ii sameyn kara waxaan annigu doonayo haddii ay dhacdo.
“Waxyaabaha wanaagsan ayaa ah inaan raaxo ku dareemo garoonka dhexdiisa.wax walba waa ay sahlan tahay maxaa yeelay waxaan heytsaa waayo-aragnimo.
“Da’da, Waxaan u imid inaan barto in aanan rabin ama u baahnayn in aan ka soo baxo kubad kasta oo aan hoos u dhigo, sidii aan u shaqeyn jirey shan ama lix sano ka hor. Kompany ayaa ku dhibtoonayay dhaawacyo soo gaaray laacibkaan sannadihii u danbeeyay.
Kompany ayaa xilli ciyaareedkaan horyaalka Premeir league kooxda u saftay keliya seddex kulan.
Previous: Banaadir oo gaartay kama danbeysta koobka General Daa’uud
Next: Cajiib! Arday soo hindisay Baskiil is wadaya